September 11, 2021 - Online Hartha
ခြောက်ထောင်နဲ့ရမလား ခြောက်ထောင်နဲ့မရရင်မယူဘူးဆိုတဲ့ မိန်းမရေ ကျေးဇူးပါ
ခြောက်ထောင်နဲ့ရမလား ခြောက်ထောင်နဲ့ မရရင်မယူဘူးဆိုတဲ့ မိန်းမရေ ကျေးဇူးပါ မိန်းကလေး.. အများစု သိပ်ထူးချွန်တဲ့ နေရာတွေထဲမှာ။ဈေးဆစ် တာကလည်း တစ်ခု.. အပါအဝင် ပဲခင်ဗျ။ အခုလည်း ကြည့်လေ.. တစ်သောင်းနှစ် ထောင်တန်တဲ့ ပစ္စည်းကို တစ်ဝက်ဈေးနဲ့ ခေါက်ချိုး ဆစ်ချနေတာ။ ကိုယ့်မှာ.. တော့ လက်မှာ ရွှေလက် ကောက်တွေ တစ်တောင် လောက် ဝတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင် အန်တီ.. ကြီးကို ကြည့်ပြီး အားနာလှပြီ။ သူ့လှမ်းကြည့်.. လိုက်တော့ မျက်နှာက ပြတ်သားနေ.. လိုက်တာ။ခြောက် ထောင်နဲ့ရရင် ယူမယ်၊ မရရင် မယူဘူး ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်း.. ကိုယ်သူ့ကို အဲ့ဒီလောက်အထိတော့ မလုပ်ပါ နဲ့ဆိုတဲ့။ အားနာစရာ မျက်နှာပေးနဲ့ တချက်ကြည့်ပြီး.. လက်ကို လှမ်းတို့ပါသေးတယ်။ဒီတော့ သူကလည်း … Read more
ဖုတျဝငျတယျဆိုပွီး သတေဲ့အမအေိုကွီးတဈဦးရဲ့အလောငျးကို မသင်ျကာလို့ ရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…
“ဖုတ်” ဝင်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…! အမေဆာလို့ပါ သားရယ်တဲ့လား …….တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးကို လုပ်ခွင့်ပေးသည် ဖြစ်စေ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီး ထိုက်ပါတယ်.။ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့လေ့လာဖူးပါတယ်။ (ဒေသနှင့်အမည်များမပြောပါ။) ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေငြိုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင်သေစေချင်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူး …။ ပြုစုတဲ့သူတွေကရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အဖိုးအဖွားတွေက အသက်သာကြီးတာ ဝမ်းမီးက​ကောင်းတုန်း။ အိပ်ရာထဲလဲနေပေမယ့် အစားကို ကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုအစားဝင်နေတာကိုဘဲ မသိနားမလည် ဆရာဝင်လုပ်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က “ဖုတ်ဝင်နေပြီ” တဲ့။အသက်ကကြီး ရောဂါက နာတာရှည် ပြုစုရတာကြာလာ​တော့ သားသမီးတွေ ​စေတနာပျက်လာ ပြီလေ။လူကြီး လူမမာဆိုပြီး ​ကျွေးတာကနည်းနည်း ဆိုတော့ ညသန်းကောင်အချိန်ရောက်တော့ ဆာလာပြန်ရော။ ကျွေးတုန်းက … Read more
မီးပှိုငျ့နားက ပနျးရောငျးနတေဲ့ ကလေးလေးတဈယောကျတှလေို့ မေးကွညျ့လိုကျမှ သူ့စိတျဓာတျကို သိလိုကျရတယျ
မီးပွိုင့်နားက ပန်းရောင်းနေတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်တွေ့လို့ မေးကြည့်လိုက်မှ သူ့စိတ်ဓာတ်ကို သိလိုက်ရတယ် ထားဝယ်မြို့ ရုံးကြီးပွိုင့်နားမှာ ပန်းရောင်းနေတဲ့ ခလေးကို အရင်က မတွေ့ဖူးဘူး။ ခုတွေ့နေရတာ ၃ ရက် ၄ ရက်လောက် ရှိပြီ။ ပန်းဝယ်အုံးမှ ပဲဆိုပြီး စိတ်ကူးနေတာ ၁၈ ရက်နေ့ညက။ အားပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူနဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ အေမ့ကို ရှာကျွေးနေတဲ့။ မီးပွိုင့်နားက ပန်းရောင်းနေတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်တွေ့လို့ မေးကြည့်လိုက်မှ သူ့စိတ်ဓာတ်ကို သိလိုက်ရတယ် သားအကြီးဆုံးတဲ့။ အောက်မှာက ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ ရှိသေး တယ်တဲ့။ သူ့ဘေးမှာ ရပ်နေတဲ့ မဇာဇာလင်း က ပန်းကူရောင်းပေးနေ တာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ။ အရင်က ပြောင်းဖူးပြုတ် ရောင်း တယ်တဲ့ … Read more
ယုံကြည်မှုတွေကို အညွှန့်ကျိုးအောင် မချိုးမိကြပါစေနဲ့
ယုံကြည်မှုတွေကို မသတ်မိကြပါစေနဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ဆံပင် ညှပ်သူများ နှင့် စည်ကားနေ၏။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာ တစ်ယောက်မှ လွဲပြီး ကျန်ဆံသဆရာ အားလုံးမှာ ဆံသ ပေးနေကြ လေသည်။ ထို ဆံသဆရာ လူငယ်လေး တစ်ဦးသည် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း များစွာဖြင့် ဆံပင် လာညှပ်မည့် ဧည့်သည်ကို မျှော်နေ သည် ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ယနေ့မှ စကာ သူ့ကို ဆံသခွင့် ပေးလိုက်သည် ။ သူသည် ထိုဆိုင်တွင် အောက်ခြေ သိမ်း အလုပ်များနှင့် ခေါင်းလျှော်သည့် အလုပ်တွေ ၂ နှစ် လုပ်ရင်း ဆံပင်ညှပ် ပညာကို သင်ယူ ခဲ့ရပြီး.. ယနေ့သည် သူ၏ ပထမဆုံးသော ဧည့်သည်ကို ဆံသပေးရမည့် နေ့တနေ့ … Read more
မိဘဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကသာ မသန်စွမ်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် သားသမီးအတွက်ဆိုရင် စွမ်းအားသတ္တိအပြည့်နဲ့ပါ
မိဘဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကသာ မသန်စွမ်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် သားသမီးအတွက်ဆိုရင် သတ္တိအပြည့်နဲ့ပါ ကိုယ်တိုင်မှာ မသန်စွမ်းဖြစ်နေသော်လည်း သမီးလေးကို စွန့်မပစ်ရက်ပဲ တတ်နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော မိခင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ မိခင်တစ်ဦးသည် မွေးရာပါပိုလီယိုရောဂါကြောင့် မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့ရာ လက်ထပ်မည့်အမျိုးသားပေါ်လာခဲ့သော်လည်း အစပိုင်းတွင် ကောင်းသလိုလိုနှင့် ကလေးလည်းတစ်ယောက်ရရော ထားသွားပစ်ခဲ့သည်။ ကံဆိုးစွာဖြင့် မွေးလာသည့် ကလေးမှာလည်း မွေးရာပါ ဦးနှောက်အကြောသေရောဂါ ဖြစ်နေကာ ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်ကုန်ကာ ထားသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူသည် သူမဘဝတစ်လုံးကို သမီးလေးအတွက်သာ ပုံအပ်ပြီး အဖေလိုရော အမေလိုရော ချစ်ပေးကာ အခြားသူများမှ မွေးစားရန် လာတောင်းကြသော်လည်း သမီးလေးက သူမအသက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ #Crd Unicode Version မိဘဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကသာ မသန်စွမ်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် သားသမီးအတွက်ဆိုရင် သတ္တိအပြည့်နဲ့ပါ … Read more
ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ မိခင်နားမှာဘဲ အမြဲကပ်နေတဲ့ ၈နှစ်ကလေး ကူးစက်ခြင်းမရှိတဲ့ ကလေးစားနေကြအစားအစာများ
ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ မိခင်နားမှာဘဲ အမြဲကပ်နေတဲ့ ၈နှစ် ကလေး ကူးစက်ခြင်းမရှိလို့ ကလေး စားနေကြအစားအစာကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… အမေက ကိုဗစ် ဖြစ်ပေမယ့် မောင်လေးက ကိုဗစ်မကူးခဲ့ပါဘူး။ကလေးက ၈ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အမေတိူ့ ဆေးရုံမှာသွားနေရတုန်းကလဲ မောင်လေးပါ ပါသွားတာပါ။ကလေးကငယ်တဲ့အပြင် အမေနားပဲ ကပ်နေတာမို့ ရောဂါကူးနိုင်ခြေအများဆုံးလို့ ယူဆကြပါတယ်… ဒါနဲ့ပဲ ကလေးက ကိုဗစ်လက္ခဏာ ဘာမှ မပြသေးပေမယ့်ရုတ်တရက်များ ညကြီးမိုးချုပ် တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် သွားရ လာရအဆင်မပြေမှာစိုးလို့ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ကလေးကိုပါ အမေနဲ့အတူ ဆေးရုံမှာ ထားခဲ့ရပါတယ် အခု အမေပြန်ကောင်းပြီး ဆေးရုံကဆင်းလာတဲ့အထိ မောင်လေးက ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိလဲ ကလေးက အကောင်းပါ။ သူစားနေကြ ကလေးအားဆေး ဗီတာမင်စီ ကလွဲရင် ဘာဆေးမှ မတိုက်ခဲ့ မသောက်ခဲ့ရပါဘူး … Read more
အလောင်းတော်ကဿပဘုရား ဖူးချင်လို့ဆိုတဲ့ မိခင်ကို တောတောင်တွေဖြတ်ပြီး ထမ်းပို့ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ မိခင်ကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီး အလောင်းတော်ကဿပဘုရား ဖူးစေခဲ့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးအကြောင်း ကြည်ညိုနိုင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်… အလောင်းတော်ကဿပဘုရားသွားဖူးမယ်ဆိုရင် တောတွေ တောင်တွေကို ဖြတ်သန်းရတာပါ… အဲတာကြောင့် အသက်ကြီးပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ မိခင် ဖူးမြော်နိုင်အောင် ဆရာတော်က ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးပို့ပေးခဲ့တာပါ…. မွေးအမေကျေးဇူးဆပ်သော ဆရာတော်…လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ အမေအိုကို အလောင်းတော်ကဿပဘုရားဖူးစေချင်လွန်းလို့ကိုယ်တိုင်ထမ်းပိုးပြီး ပို့နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ ပုံပါ ။ လေးစားကြည်ညိုမိပါသည် အရှင်ဘုရား။ မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုတာ ဘုရားလောင်းတို့ရဲ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်တာမို့ တပည့်တော် သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိပါတယ်ဘုရား။ ခရက်ဒစ် Unicode Version အလောငျးတျောကဿပဘုရား ဖူးခငျြလို့ဆိုတဲ့ မိခငျကို တောတောငျတှဖွေတျပွီး ထမျးပို့ခဲ့တဲ့ ဆရာတျော လမျးမလြှောကျနိုငျတော့တဲ့ မိခငျကို ကိုယျတိုငျထမျးပွီး အလောငျးတျောကဿပဘုရား … Read more
နှလုံးသားအရင့်အမာကြီးတွေကို မျက်ရည်ကျအောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ မေ့မရနိုင်တော့မယ့် ကြေကွဲစရာနေ့တစ်နေ့
အမေ့ကိုပါ ရောဂါကူးချင် ကူးပါစေတော့ဆရာမတွေကို ပြောပြီး သမီးလေးနဲ့အတူ အမေဘေးမှာ ရှိနေပေးမယ်နော်တဲ့… မှတ်မှတ်ရရ အဲ့နေ့က ကိုဗစ်ကြောင့်ကျနော့် နှလုံးသားအရင့်အမာကြီးကို မျက်ရည်ကျအောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ မေ့မရနိုင်တော့မယ့် ကြေကွဲစရာနေ့ တနေ့ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ယ္ခင် အကြိမ်တွေလိုဘဲQuarantine ကနေပိုးမရှိတဲ့သူဆို ပျော်ရွှင်စွာအိမ်ပြန်ကြ ပိုးတွေ့တဲ့သူတွေဆို ဆက်လက်နေပြီးနောက်ရက်မှာ ကုသရေးစင်တာကိုသွားကြရတယ်။ ဒီနေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပါ”အမေ! အဖေ! သမီးတယောက်ထဲဒီမှာ နေခဲ့ရမှာလား ဟင်” ”အေးပေါ့သမီးလေးရယ်သမီးက ပို့တွေ့လူနာဖြစ်နေတော့ဆေးကုသခံရမယ်လေ သမီးလေးရဲ့” ”ဟုတ်လားဟင် မေရီးဖေရီးပြောတာ” “သမီးလေး ဆေးကုသခံလိုက်နော်သမီးဘာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းမာသွားရင် အမေကိုယ်တိုင် လာခေါ်မယ်နော်သမီးလေးရယ် တိတ် တိတ်” ”ဟင့်အင်း ဟင့်အင်းမလိုက် ပါရစေနဲ့မေမေနဲ့ ဖေဖေရယ် နော်သမီးကြောက်တယ် နော် ဖေရီး” ကြေကွဲစရာ ရင်နင့်စရာမြင်ကွင်းနဲ့ အသံလေးတွေကြားမှာကျနော် စီးမျောရင်း စွံ့အနေတဲ့အချိန်မှာ ”ကဲဘာသမီးရယ်…အမေ ရင်ခွင်ထဲမှာဘဲနေတော့နော်” မိခင်ဖြစ်သူမှ … Read more